Saints Michael, Gabriel na Raphael, Onye kachasi ubochi nke 29 Septemba | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Saints Michael, Gabriel na Raphael, Onye kachasi ubochi nke 29 Septemba
di Paolo Tescio - Septemba 29, 2020
Senti Michael, Gabriel na akụkọ banyere Raphael
Ndị mmụọ ozi, ndị ozi Chineke, na-apụtakarị na Akwụkwọ Nsọ, mana naanị Michael, Gabriel na Raphael ka a kpọrọ aha.
Maịkel pụtara n'ọhụụ Daniel dị ka "onye isi ukwu" nke na-agbachitere Israel n'aka ndị iro ya; n'ime Akwukwo nke nkpughe, duru usuu ndi agha nke Chineke rue mmeri ikpeazu megide ike nke ajo ihe. Inye Michael bụ ofufe mmụọ ozi kacha ochie, nke bilitere na East na narị afọ nke anọ. Chọọchị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ malitere ịme oriri na-asọpụrụ Michael na ndị mmụọ ozi na narị afọ nke XNUMX.
Gabriel gosikwara ọhụụ Daniel, na-ekwupụta ọkwa Maịkel ga-arụ n’atụmatụ Chineke, ihe a kacha mara amara bụ izute otu nwa agbọghọ onye Juu aha ya bụ Meri, onye kwetara ịmụ Mesaya ahụ.
Ọrụ Raphael na-ejedebe na akụkọ banyere Agba Ochie nke Tobias. N'ebe ahụ, ọ dị ka ọ na-eduzi Tobaị nwa, Tobiah, site n'ọtụtụ ihe egwu dị egwu nke na-eduga na njedebe obi ụtọ okpukpu atọ: Alụmdi na nwunye Tobiah na Sera, ịgwọ ọrịa ìsì Tobiah na mweghachi nke ihe nketa ezinụlọ.
Emere ncheta nke Gabriel na Raphael na kalenda ndị Rom na 1921. Ntughari nke kalenda nke 1970 jikọtara oriri ha n'otu n'otu na nke Michael.
Onye ọ bụla n'ime ndị isi mmụọ ozi na-arụ ọrụ dị iche na Akwụkwọ Nsọ: Michael na-echebe; Gebriel mara ọkwa; Ntuziaka Raphael. Nkwenkwe mbụ na ihe ndị a na-akọwaghị bụ n'ihi omume nke ndị mmụọ na-enye ohere maka echiche ụwa sayensị na echiche dị iche nke ihe kpatara na mmetụta. Ma ndị kwere ekwe ka na-enweta nchebe Chineke, nkwukọrịta, na nduzi n'ụzọ niile na-emegide nkọwa. Anyị enweghị ike ịchụpụ ndị mmụọ ozi nke ukwuu.
Gịnị mere Rosary ji bụrụ ngwá ọgụ dị ike megide Setan?
Gịnị ka Chineke chọrọ n'aka anyị? Na-eme obere ihe nke ọma ... gịnị ka nke ahụ pụtara?
4 Eziokwu nke Onye Kraịst ọ bụla na-agaghị echefu echefu
Nọvemba 2, ncheta ndị nwụrụ anwụ, mmalite na ekpere
"Ndị mmụọ ọjọọ na -atụ egwu mgbe niile", akụkọ onye na -apụ apụ